Safal Khabar - एनआरएनए अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड राज्यमा आविष्कार पाण्डेको उमेद्वारी, पढ्नुहोस् उनका एजेण्डा
एनआरएनए अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड राज्यमा आविष्कार पाण्डेको उमेद्वारी, पढ्नुहोस् उनका एजेण्डा
बुधबार, १८ असार २०७६, १६ : ४५
काठमाडौं । एनआरएनए अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्यान्ड राज्य समन्वय समितिको युथ कोर्डिनेटरमा उम्मेदवारी दिनुभएका गोरखाका आविष्कार पाण्डेले आफ्नो एजेण्डा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको आगामी जुलाईमा हुन गैरहेको निर्वाचनमा क्वीन्सल्यान्ड राज्य समन्वय समितीको युथ कोर्डिनेटरको पदमा उम्मेद्वारी दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाले चुनाबको लागी अघि सारेको एजेन्डाहरु यस्ता छन् :
२) Regional Area मा हुने local सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू जस्तै Toowoomba यही August हुने culture program र Cairns को program मा NRNA Queensland को प्रतिनिधित्व गर्ने निर्णय गरेका छाैं!
३) Queensland को garden city, Toowoomba मा यही September मा हुने flower festival मा स्थानीय कमिटी (। Nepalese association of Toowoomba) सगै मिलेर NRNA state committee सहभागी बन्ने !
३) खेलकूदमा सबै Regional area को सहभागीता गराउन, networking र कार्यक्रम राखिनेछ!
४) Brisbane को हकमाअहिले भइरहेका राम्रा कामको निरन्तरता
क) NAQ सगँको समुन्वय, state government संग समन्ध बिस्तार, culture programme गरिनेछ!
ख) बिध्याथीको समस्या समाधान गर्न बिशेष ध्यान दिइनेछ!
५) state level मा बिज्ञ समूह गठन गरिने छ, जस्तै i) safety Road network सगं सहकार्य, ii) environment, forestry, र agriculture सगँ सम्बन्धित धेरै scientists यस state मा हुनु भएकोले Nepal र Nepali हितमा कसरी टेवा पुर्याउन सकिन्छ, अबको committee ले गर्ने छ !
एनआरएनएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी शुल्क नै दश लाख !
गैरआवासीय नेपाली सङ्घको निर्वाचनमा सम्भवतः नेपालकै सबभन्दा बढी उम्मेद्वारी दर्ता शुल्क तोकिएको छ । सङ्घको...
कहिले घरमा हुँदै नभएको घटना भयो भनेर...
अमेरिकामा विभिन्न राज्य तथा शहरमा बसोबास गर्ने...
दुबईमा माइक्रो बस दुर्घटना, ६ जना नेपालीको मृत्यु
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा सडक दुर्घटनामा...